ကျတော်တို့ LLW Online Shopping မှာ Desktop & Laptop Desk နှင့် Laptop Cooling Table များကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။ သစ်သားကျိတ်သားကိုအခြေခံလုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းများ Aluminum အခြေခံထားသောပုံစံများဖြင့် ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
- Suncool Wood Cooling Table L9 ( အံဆွဲပါ ) - 32000Ks
- Suncool Wood Cooling Table L10 ( အံဆွဲမပါ ) - 30000Ks
- Q5 Aluminum Cooling Table - 33000Ks
- Violet & Black Cooling Table - 28000Ks
- Bossanova Cooling Table - 25000Ks
- Desktop & Laptop Desk - 35000Ks
၀ယ်ယူလိုပါက Online Page မှတဆင့် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်သလို အမှတ် ၁၇၉ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အလယ်ဘလောက် ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် ။
Online မှဆက်သွယ်မှာယူသူများအတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက်အရောက်ပို့ ၀န်ဆောင်မှု့ရှိပါတယ် ။
ဆက်သွယ်ဖို့ရန်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ ၀၁-၃၈၆၄၃၃ ၀၁-၃၉၈၃၃၁ တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Aavashare Mym 08/02/2017 at 08:29 PM
Dear Blogger. please place all advertisements to Market Place. Market Place isaDedicated place for you to place free ads. Thank you
Thu ra 27/12/2017 at 12:53 PM
Naing Ye Htet 07/06/2018 at 10:21 AM